Kaominina Ivato : Notokanana ny CsbII, lalana, sekoly vaovao -
AccueilRaharaham-pirenenaKaominina Ivato : Notokanana ny CsbII, lalana, sekoly vaovao
Kaominina Ivato : Notokanana ny CsbII, lalana, sekoly vaovao
05/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fotodrafitrasa miisa telo no natolotry ny fitondram-panjakana ho an’ny mponina eny Ivato, ary notanterahina omaly ny fitokanana azy ireo. Tao ny toeram-pitsaboana CSB II Ambodirano misy rihana iray, izay ahitana fandriana efatra sy fitaovana arifomba mifanaraka amin’ny tolotry ny mpitsabo. Ao ihany ny sekoly fanabeazana fototra Ilaivola izay ahitana efitra enina sy dabilio 70. Ny lalana ahafahana mivezivezy mankany amin’ny Institut National de Promotion Formation (INFP). Raha araka ny fanazavana voaray avy any amin’ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Ivato, Penjy Randrianarisoa, dia tafiditra ao anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena ny fanamboarana ny toeram-pitsaboana, avy amin’ny hetran’ny kaominina kosa no nanamboarana ny sekoly sy ny lalana. Tonga nisolo tena ny Filoham-pirenena tamin’ny fitokanana ireo fotodrafitrasa ireo moa ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Olivier Mahafaly.
Hita taratra tamin’izany fotodrafitrasa izany ny fiaraha-miasa teo amin’ny kaominina sy ny fitondram-panjakana foibe ary ny ezaka teo amin’ny fandoavan-ketra nataon’ny vahoaka teny an-toerana, ka nahafahana namerina ny vokatr’izany tamin’ny vahoaka indray. Raha araka ny vaovao voaray hatrany moa, dia afaka 2 herinandro dia hanomboka ny fanamboarana ny tsena, araka ny efa fampanantenana nataon’ny fanjakana tamin’ny vahoaka eny ifotony. Ny olana misy mantsy dia lasa tsy manara-penitra intsony ny toerana satria tsy voahaja ka anjakan’ny loto, eny ihany koa no fanararaotan’ireo mpanao hadalana.
Efa hatrany am-boalohany mihitsy no tsapan’ny rehetra, fa tsy aharitra ny fiarahan’ny TIM sy Mapar na dia mitovy ihany aza ny tanjona, dia ny hanongana ny mpitondra ankehitriny. Ankoatra ny tsipaka ambava fo nation-dRavalomanana ireo ...Tohiny
Akinwumi Adesina:« TSY TOKONY HAHANTRA NY GASY »
Fampielezan-kevitra : Tsy azo atao anatin’ny trano fivavahana
Filatsahan-kofidiana : Nisokatra amin’ny fomba ofisialy